Fil d'actualités du 30/05/2020
13/05/2020 - 19:00 : LAMA: Maty noho ny ratra nahazo azy i Norbert Ramandiamanana na Lama izay tratra teny Analamahitsy ny maraina teo. Voatifitra teo amin'ny foto-peny izy.
Archive du 20190514
Fitsarana lasa fitaovana politika Depiote teo aloha 79 hogadraina ?
Efa eny am-pelatanan’ny Fitsarana miady amin’ny kolikoly na ny PAC (Pôles Anti-Corruption) etsy 67 Ha amin’izao ny dosie mahakasika ny kolikoly niseho teny amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny fiandohan’ny taona 2018,
RMTF sy ny namany « Tsy avotra i Madagasikara »
Feno 47 taona omaly ny nahatsiarovana ny tolon’ny 13 mey 1972. Toy ny isan-taona dia nisy ny fanateram-boninkazo tetsy amin’ny kianjan’ny 13 mey Analakely.
Fampidinana ny vidin-tsolika Mbola gidragidra be hatreto
Ny 28 aprily no nilaza fa hampidina ny vidin-tsolika i Andry Rajoelina, saingy tsy nisy tohiny hatreto.
Baolina kitra – Comité de Normalisation Nohalavain’ny FIFA ny fotoam-piasany
Mbola hanohy ny asan’izy ireo Rtoa Atallah Beatrice sy ny ekipany satria hohalavaina hatramin'ny septambra izao ny fotoam-piasan'ny komity vonjimaika natsangana hitantana ny federasiona malagasin'ny baolina kitra (Comité de normalisation).
Ligin’ny Rugby Vakinankaratra Voahosotra ho tompondaka rejionaly ny fileovana 3FAI
Nifarana tamin’ny alahady 12 mey teo rehefa naharitra efa-bolana (janoary-mey 2019) ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny Rugby ao Vakinankaratra izay nandraisana fileovana 11 anjara.
Basket N1 B D sy U 20 G Tompondaka ny Cospn2 vehivavy sy ny Mb2All zatovolahy
Tontosa ny alahady 12 mey 2019 teo tany amin’ny kianja Drjs Fenoarivo-Atsinanana ireo lalao famaranan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara 2019 taranja basket-ball sokajy N1 B D sy U 20 G.
JEREMY MOREL Nanjakan’i Jérémy Morel sy ny Olympique Lyonnais ny alahady teo ny kianjan’ny Olympique de Marseille.
Efa ho 130 andro izao no nijoroan’ny fitondram-panjakana vaovao. Tokana ny fanontaniana mahafehy ny raharaham-pirenena. Inona no atao? Tsy mety tafainga ny IEM.
Mpanao gazety James Robin Hanaovana tolo-tanana etsy amin’ny Tahala Rarihasina
Mpanao gazetin’ny Radio Fanambarana, tsy zoviana amin’ny maro intsony i James Robin. Mandalo tsy fahasalamana tanteraka ny tenany ankehitriny ary manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly Miaramila Soavinandriana na ny HOMI.
ZANDARY NAKARINA HOTSABOINA
Zandary mpianadraharaha tratry ny tsy fahasalamana iray izay miasa tany Ampasinambo Mananjary no voatery novonjena niaraka tamin'ny angidimby nankeny amin'ny hopitaly Soavinandriana CenhoSoa omaly.
FID SY BIANCO
Haharitra 5 taona ny fiarahamiasa eo amin’ny FID sy ny BIANCO nosoniavina omaly teny Ambohibao momba ny ady amin’ny kolikoly.
Tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana Nofoanana ireo fandaniana tsy mazava
Naharitra 3 andro ny nandinihana ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana (LFR 2019) niarahana tamin’ny governemanta sy ny filohan’ny Repoblika.
Halatra Moto sy Bisikleta Voasambotra ry Bôlô Kely sy ny ekipany
Tra-tehaka ny faran’ny herinandro teo ny teny Mandroseza sy Ankazomanga ny tambajotran’ny mpangalatra kodiaran-droa.
Anosipatrana atsinanana Mpidoroka sady mpivarotra rongony iray tratran’ny polisy
Zava-mahadomelina alaina avy eo Anosizato seraina eny Anosipatrana no tra-tehaky ny mpitandro ny filaminana.
Olon’ny kandida Félix Randriamandimbisoa Novonoina telolahy teo am-pametahana “banderole”
Lehilahy iray antsoina hoe José no niharan’ny herisetra raha izy nametaka « banderole » an’ny kandida Félix Randriamandimbisoa, natolotry ny Vovonana Dinike eny amin’ny Boriborintany faha-4 eto Antananarivo.